အမေ့လက်မှတ် (သက်ထွေး) | PoemsCorner
မှောင်မဲမိခဲ့လဲ အမေ ..
ကကြီး ခခွေး ဦးနှောက်နဲ့
ဒီလူဆိုး အတွက်ပဲလေ …
တစ်ချက်သာ ပါခဲ့ပါတယ် မေမေ .. ။ ။
မေ ၈ ၂ဝ၁ဝ ညနေ ၃း၄၈
မေ ၉ ၂ဝ၁ဝ အမေများနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာပါ။ တစ်နေ့ လုံးမစားမသောက်နဲ့ တော်တော်ညှစ်ယူပြီး ရေးထားရကြောင်းပါ။
In: ကဗျာ Posted By: Thet Twe Date: May 8, 2010 All Time
လွတ်ကျသွားတဲ့ အမှန်တရား (သက်ထွေး)
မနက်ဖြန်ရဲ့ .. လက်ကျန် (သက်ထွေး)
မနက်ခင်း မှ နံနက်ခင်းဆီသို့ (သက်ထွေး)
မရေရာနိုင်ခဲ့ခြင်း … (သက်ထွေး)
Leave comment 18 Comments & 1,812 views
kabyar ka yin htal hti aung ko yauk par tal… pee tot kyabyar sayar phat pya tae. kabyar yoot than kyount ngo mi par tal… ayann kyite tar par kabyar lay ko…. kabyar sayar yae. khan sarr chat tway yin htal hti yauk aung kabyar sayar po’. pay hnaing khae. par tal naw….
kook thar amay nay yar hmar ko. tharr laydlo yay pay yinatine ma thi pal wan thar hmar par…pee tot pite san tway pay pee wal pay tae. lat saung tway htet lal po tan phoe htar hmar….(amay tine laldlo pal ta myat ta noe shi hmar par pal lay… ko. tharr tha mee pay tae. lat saung pal naw… pite san nae. wal pee pay tar pal phyit phyit…. thu doe. pite san nae. pal thu doe. ko pyan wal pay tar pal phyit phyit) =’)
p.s.dkabyar lay ka tan phoe phyat ma ya par buu…
By: kook at May 8, 2010
ငိုချင်သွားတယ်နော်.. ဒီကဗျာကြီးဖတ်ပြီး.. အဟင်…..
သူကြီးက.. အပီကို လန်းနေတာ.. joood နေတာ..
ahatttt! doh thu gyi kwa!! 😀 😀 😀
By: Kitty Yang at May 8, 2010
ကဗျာ ကောင်းတယ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကြီး ရေးထားတာကို ကျွန်တော်လို မအူမလည်က ချီးကျူးရင် သူကြီး သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ ခင်ည။
By: ChIr0N at May 8, 2010
ညှစ်ရေးထားတာ ယုံပါဒယ်.. လန်ထွက်နေဒယ် =D
By: mgpyone at May 8, 2010
ဟုတ်ပါ့ ကောင်းတယ်ပြောရင် အစ်ကို သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ ပြောတော့ဘူး..
(: (:(: clapping, bro.. ကဗျာကို clapping တာပါ. မစားရ မသောက်ရတာကို clapping တာဟုတ်ပါဘူး… 😛
By: melodyphyO at May 8, 2010
By: Second Two at May 11, 2010
Can i share or use ur poem?
By: smo at May 11, 2010
By: Nyar Lat Taw at May 11, 2010
@smo, you can share my poems. But cannot use as yours 😀
By: Thet Twe at May 12, 2010
By: ပင်ကီ at May 18, 2010
အမေ့လက်မှတ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း မစားမသောက်လည်း ဗိုက်ပြည့်နေပြီမဟုတ်လားရှင့်။
By: manawphyulay at May 18, 2010
By: ဖြိုးဖြိုး at Aug 11, 2010
By: ခင်းခင်း at Sep 2, 2010
အကိုကဗျာကကောင်းပါတယ် ညှစ်ရေးတာဆိုတော့ ဖီလင်သိတ်မထဲ့နိုင်ဘူးနော် ဒီတော့ကဗျာကပေါ့နေတယ်
By: thawna at Dec 7, 2010
မှောင်မဲမိခဲ့လဲ အမေ .. ကောင်းပါတယ် ကဗျာလေးက
By: နှောင်းလူ at Dec 7, 2010
မနှစ်အမေများနေ့တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးဆိုပြီး သတိတရ လာဖတ်သွားတယ်..
clappinggggggggggggggggggg.. ever fav
every single word is really really awesome..
of course excellent poem about mom..
By: ဖြိုးဖြိုး at May 8, 2011
တကယ်ကိုခံစားရပါတယ်ဗျာ အားလုံးကောင်းလွန်းပါတယ် ရှေ့လယ်နှောင်း ရသအပြည့်အ၀ပေးနိုင်ပါတယ်
By: Moe Thit Lay Pyay at May 8, 2011
အမေ ပါတဲ့ ကှောတွေကို ပိုကြိုက်တယ်….ကိုသက်ထွေရေ…။
By: ဇော်သက်ဦး(Ayatekalay) at Jul 6, 2011